Fingerprint Lock နှင့် သာမန်လော့ခ် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း - သတင်း - Wenzhou Zhechi Electric Co., Ltd
လက်ဗွေသော့ကို အမှန်တကယ် စမတ်သော့ဟု ခေါ်သင့်သည်။ လော့ခ်သည် သမားရိုးကျစက်မှုလော့ခ်သို့ မော်တာကို ပေါင်းထည့်ကာ မော်တာသည် ထိန်းချုပ်ရန် ညွှန်ကြားချက်များကို လက်ခံသည်။လက်ဗွေသော့ခတ်ခြင်း။clutch မော်တာမှ ညွှန်ကြားချက်များကို လက်ခံသည့်နည်းလမ်းများတွင် လက်ဗွေများ၊ စကားဝှက်များ၊ သံလိုက်ကတ်များ၊ ဘလူးတုသ်နှင့် မျက်နှာမှတ်မိခြင်း တို့ ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် လက်ဗွေ အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို ပိုအသုံးများသည်။ အသုံးပြုရလွယ်ကူသောကြောင့် Fingerprint Lock ဟုခေါ်သည်။
ပေါင်းစပ်သော့ခတ်ခြင်း၏ အနှစ်သာရမှာ စက်လော့ခ်ဖြစ်သည်။ မော်တာကို ထိန်းချုပ်ရန် တပ်ဆင်ထားသော အီလက်ထရွန်းနစ် ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြုပါ။ မော်တာသည် အမိန့်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် စက်လော့ခ်ကိုဖွင့်ရန် လှည့်သည်။ ခိုးမှုဆန့်ကျင်သောသော့ လုံးဝမရှိသော်လည်း ကောင်းမွန်သောသော့သည် အရေးကြီးသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စံနှုန်းများရှိနေသေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင် တံခါးဖွင့်နိုင်သည့် စမတ်သော့ခလောက်များသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသော့အပိုပစ္စည်းများ လိုအပ်ပါသည်။ သော့ခတ် core grade သည် လော့ခ်တစ်ခု၏ ပျက်စီးမှုကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် အရေးကြီးသော စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားသော အကဲဖြတ်မှု စံသတ်မှတ်ချက်များမှာ အရေးပေါ် ပါဝါအားသွင်းခြင်း ရှိ၊ မရှိ၊ လက်ဗွေ မှတ်သားမှု မြန်ဆန်သည်ဖြစ်စေ၊ လော့ခ်ချနိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ ကမ္ဘာ့လော့ခ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်ဖြစ်စေ၊
1. သော့ခတ်အူတိုင်သည် မြင့်မားသောအဆင့်ရှိပြီး ဘေးကင်းမှုသည် သဘာဝအတိုင်း မြင့်မားသည်။
တံခါးသော့ခတ်ခြင်း၏ ဘေးကင်းမှုသည် ပြင်းထန်သော ဖယ်ရှားခြင်းအဆင့်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ သော့ခလောက်များ၏ ဘေးကင်းမှုသည် အဓိကအားဖြင့် သော့ဆလင်ဒါ၏ လုံခြုံရေးအဆင့်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ စျေးကွက်ရှိ စက်လော့ခ်များနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်သော့ခလောက်အများစုတွင် စက်လော့ခ်ဆလင်ဒါများရှိသည်။ Class A ၏ဖွင့်ချိန်သည် 1 မိနစ်ကျော်၊ Class B ၏ဖွင့်ချိန်သည်5မိနစ်ကျော်ဖြစ်ပြီး Class C ၏ဖွင့်ချိန်သည် 10 မိနစ်ကျော်ဖြစ်သည်။ လိုအပ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီသော ultra-B၊ ultra-C၊ C+ စသည်တို့ကဲ့သို့သော အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဝေါဟာရကို အသုံးပြုရန် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် တားမြစ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်၊ C-level အီလက်ထရွန်နစ်သော့နှင့် စက်လော့ခ်ကို ရွေးချယ်ရန် ဘေးကင်းပါသည်။
2. လက်ဗွေရာခေါင်းမှ ချမှတ်ထားသော နိယာမသည် လော့ခ်၏ လုံခြုံရေးအဆင့်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်-
(1) Optical fingerprint- ပြင်းထန်သော ပတ်ဝန်းကျင်လိုက်လျောညီထွေရှိမှု၊ အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆပြောင်းလဲမှုများကြောင့် ထိခိုက်မှုနည်း၊ ကောင်းမွန်သော တည်ငြိမ်မှု၊ တာရှည်ခံမှု၊ semiconductor fingerprint module ထက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး၊ စစ်ရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ လုံခြုံရေး၊ မြင့်မားသော နယ်ပယ်များတွင် အသုံးများသည်။
(2) Semiconductor လက်ဗွေ- vivo ဖော်ထုတ်ခြင်းတွင်၊ မြင့်မားသော သက်သေခံတိကျမှုနှင့် အာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ မြင့်မားသော သက်သေခံနှုန်း၊ ပါဝါသုံးစွဲမှုနည်းသော၊ သေးငယ်သောအရွယ်အစား။
(၃) လျှောကျနေသော လက်ဗွေရာများ- နည်းပညာဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများဖြင့် ကူးယူခြင်းမှ လက်ဗွေများကို ရှောင်ရှားရန်၊ အရွယ်အစား ပိုသေးငယ်ကာ ဝန်ထမ်းများ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းအတွက် ပိုမိုတိကျသည်။
ဟိလက်ဗွေသော့ခတ်ခြင်း။အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ထားပြီး တံခါးသော့ကို ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
အသုံးပြုသူအချက်အလက်အားလုံးကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်၊ အသုံးပြုသူအချက်အလက်ကို လွတ်လပ်စွာ ထည့်/ပြင်ဆင်/ဖျက်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည် သုံးစွဲသူများအတွက် အသုံးပြုသူအခွင့်အရေးများကို စီမံခန့်ခွဲရန် အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။ အသုံးပြုသူများသည် အချို့သောလူများကို ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုရန် လွတ်လပ်စွာ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ခွင့်ပြု သို့မဟုတ် တားဆီးနိုင်သည်။
3. ခလုတ်ကို လော့ခ်ဖွင့်ရန် အဝေးထိန်းခလုတ်ကို အသုံးပြုပါ။
သတ်မှတ်ထားသောအကွာအဝေးအတွင်း တံခါးသော့ဖွင့်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ရန် အဝေးထိန်းခလုတ်ကို အသုံးပြုပါ။ ကား၏ အလိုအလျောက်သော့ဖွင့်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အတူ ၎င်းသည် ပိုမိုထက်မြက်ပြီး မတူညီသော လူအုပ်စုများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
မှန်ကန်သော စကားဝှက်ရှေ့နှင့် နောက်တွင် နံပါတ်များစွာကို ထည့်နိုင်သည်။ ဒေတာသည် မှန်ကန်သော စကားဝှက်ကို စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေပါက၊ ရာဇ၀တ်ကောင်များ စကားဝှက်ကို ချောင်းကြည့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် စမတ်လော့ခ်ကို ဖွင့်နိုင်သည်။
5. နှိုးဆော်သံ လုပ်ဆောင်ချက်ကို တားဆီးပါ။
ပုံမှန်မဟုတ်သော အဖွင့်အပိတ်နှင့် ပြင်ပပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတွင်၊ တံခါးသော့သည် တံခါးနှင့် အနည်းငယ်လွဲသွားကာ လူများ၏အာရုံစိုက်မှုကို ဆွဲဆောင်ရန်အတွက် ပြင်းထန်သောအချက်ပေးသံကို ချက်ချင်းထုတ်ပေးသည်။ ကားအချက်ပေးသံကဲ့သို့ ပြင်းထန်သော အချက်ပေးသံသည် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူများ၏ အာရုံကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပြီး သူခိုးများ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခြင်းမှ ထိရောက်စွာ တားဆီးနိုင်သည်။ အပြုအမူ။ ဤအင်္ဂါရပ်သည် ရှုပ်ထွေးသော ဗဟိုပတ်၀န်းကျင်ရှိ သုံးစွဲသူများအတွက် အသုံးဝင်သည်။